Mumiriri weColombia kuAustria anokanda ngowani yake mumhete yeUNWTO Secretary General
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Austria Kuputsa Nhau » Mumiriri weColombia kuAustria anokanda ngowani yake mumhete yeUNWTO Secretary General
Nhau Nhau • Austria Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • Interviews • vanhu • Trending Now
Mumiriri weColombia kuAustria, Hon. Jaime Alberto Cabal, ndiye achangobvumirwa kuve chinzvimbo cheMunyori Mukuru weUNWTO. Iyi ndiyo yepamusoro-kopi kopi yehurukuro yakaitwa neTN Publisher Juergen Steinmetz.
Steinmetz: Iwe wakapinda mujaho kunonoka. Paive nechikonzero chekumira? Chii chakakonzera sarudzo yako yekupinda mukutsvaga kwakatowanda kweUNWTO Secretary General?
Cabal: Maitiro ekutsanangura kukwikwidza haana chekuita nezvido zvako chete asiwo nesarudzo yenyika. Panyaya yeColombia, vese Mutungamiriri weRepublic pamwe naGurukota rezvekunze vaida kutora danho zvichibva pakukwanisa kusarudzwa uye nehunyanzvi hunodiwa kuti ndigadzwe. Ini ndinofunga avo vakapa mukana wavo wekutanga vangangowana mukana asi kuuya pakutanga hazvireve kuti zvinoreva kutanga vashandira. Ini ndinofunga chirongwa, zvirevo, uye chimiro chemumiriri chinotora chinzvimbo chakakosha.
Steinmetz: Chii chinoita kuti iwe usiyane nevamwe vavhoterwa?
Cabal: Pasina kukahadzika, ndinoremekedza uye ndinokoshesa basa revaviri mumiriri weBrazil pamwe nemumiriri anomhanyira chinzvimbo cheMunyori weAd Hoc mukubatana nemumiriri weKorea asi mumaonero angu, mutsauko uripo pakuti aya makwikwi ndezve kuenderera. Pachivanhu, muUNWTO vechipiri vanogara vachishuvira kana kusarudzwa seMunyori Mukuru uye chikumbiro chatiri kuita chinotarisana nekugadziriswa. Mune ino kesi, isu tinoshuvira kuve nemumiriri weLatin America uyo anofuridzira maitiro aya atiri kukurudzira UNWTO.
Steinmetz: Chii chawaizoita kuti urasike kana vasiri nhengo muUNWTO. Semuenzaniso United States kana UK?
Cabal: Chimwe chezvirevo chikuru ndechekutsvaga kuwedzera kweZviri Nyika Nhengo uye Nhengo Dzakabatana; Nhengo States dzanga dzisiri kutora chikamu kana Nyika dzave nhengo dzeSangano asi dzakasiya. Kana tikatarisa Nhengo dzeNyika idzo nhasi chikamu cheSangano, nyika zana nemakumi matanhatu nenomwe, tinoona kuti pane nhamba diki kwazvo yenhengo zvichienzaniswa nenhamba yemamwe Masangano eUnited Nations anoshanda kuGeneva, New York kana Vienna. Mune Sangano iri tinosuwa nyika dzinosvika makumi mashanu dzinogona kuve nhengo yeUNWTO. Zvakakosha kuti nyika dzakaita seUK, US kana nyika dzeNordic nedzimwe dzingave chikamu cheSangano. Naizvozvo, mumaonero angu, panofanirwa kuve nechipo chakakura chezvinhu zvinooneka uye zvekongiri zveNhengo dzeNyika uye zano rine hunyanzvi hwekudyidzana kukwezva kana kukoka nyika idzi kuti dzive chikamu cheSangano. Pasina kupokana, ichi chingave chimwe chezvirongwa zvikuru zvandinoshuvira kuita.
Steinmetz: WTTC uye UNWTO yanga ichishanda semapatya e-siamese. WTTC uye UNWTO yanga ichishanda semapatya e-siamese. Zvisinei WTTC inomiririra makambani zana chete. Ehezve PATA neETOA zvakaitawo basa mukati mezviitwa zveUNWTO. Unga sanganisira sei vamwe vanobatika vemasangano akazvimirira zvakanyanya mukurumbira?
Cabal: Imwe yemabhenefiti akakura eUNWTO mukati mehurongwa hweUnited Nations ndeyekuti ndiro chete sangano rinosanganisira vemasangano akazvimirira seimwe yenhengo dzaro kuburikidza nechikamu cheMitezo Yakabatana. Sangano rinofanira kushandisa zvirinani mamiriro aya. Nenzira imwecheteyo Sangano rinoshanda pamwe neNhengo dzeNhengo dzaro, rinofanira zvakare kushanda pamwe chete nevemasangano akazvimirira vachitsvaga kubatsirwa nesimba rawo, hunyanzvi uye ruzivo mubazi rezvekushanya. Panyaya iyi, ini ndinotarisira kupa kukosha kukuru pakuiswa kwenhengo nyowani dzekubatana uye chinzvimbo chinotungamira kune avo vatove chikamu cheSangano. Ini ndinotenda zvakare basa uye chinangwa cheWTTC pamwe nekukosha kweETOA nePATA. Chikamu chebasa raMunyori Mukuru ndechekuchengetedza chiyero maererano nekukosha uye basa remasangano aya nedzimwe Nhengo Dzakabatana. Iyi nhanho ine hutano zvakare inofanirwa kuratidzwa padanho rekutonga kweSangano. Pasina kurasikirwa nekutonga kwehutongi kuNhengo dzeNyika sesangano rehurumende, Nhengo Dzakabatana dzinofanirwa kupihwa mukana wekutora mukana mukuita sarudzo huru dzeSangano.
Steinmetz: Ungaita sei iwe iyo International Coalition yeVashanyi Partner (ICTP) mumusanganiswa. Ndinofanira kukubvunza izvi, sezvo ndiri sachigaro wesangano iri.
Cabal: Kubatana pamwe neICPP kwakakosha sekubatana pamwe nedzimwe nhengo dzesangano. Ini ndinofunga kuti basa reICTP rakakosha mukati mezvirongwa zvandinopa semuenzaniso, kusimbiswa kwehunhu maererano nenzvimbo dzinoenda nevanozvipa vega mabasa, vanova ndivo vane chekuita. Zvese zvine chekuita nekusimudzira uye zvakatipoteredza zvekushanya uye izvo zvakakosha zvinhu zvekusimudzira senge dzidzo kana kushambadzira zvakakosha zvakanyanya. Naizvozvo ndinoona ICTP ichiita chinzvimbo chakakosha panguva yangu yekutonga kana ndikagadzwa sekiritari General.
Steinmetz: Ndeipi yako mhinduro pane STEP, danho rinotungamirwa neako anopokana Ambassador Dho?
Cabal: Zvirongwa zvese zvinobatsira mukusimbisa kwekushanya kwakasimba, izvo zvine chekuita nedzidzo nekudzidzisa uye zvinopa rubatsiro kunharaunda dzakatadziswa uye kudzikiswa kwehurombo zvinogamuchirwa nguva dzose. Chirongwa ichi uye hwaro uhu hunotsigirwa neUNWTO hunofanirwa kusimbiswa mune ramangwana uye UNWTO inofanirwa kuyera nzira yekuwedzera kwehurongwa kuzosanganisirwa gare gare.
Steinmetz: SeColombia, ndeupi maonero ako epasirese nezvekushanya?
Cabal: Colombia nhasi inozviratidza uye inozivikanwa nemasangano epasi rese seimwe yenyika dzine kugona kukuru maererano nezvezvino neizvo zvichaitika mukushanya. Mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvekushanya uye hunyanzvi izvo Colombia inofanirwa kupa sezuva nemahombekombe, tsika uye nhoroondo yekushanya, mhemberero, maguta, kushanya uye kushanya kwekumaruwa kunogona kuve chinhu kune kushanya kwepasirese. Maonero matsva anoratidzwa nerunyararo chinhu chinogona kushandiswa kune nyika zhinji dziri kupokana. Ini ndinofunga kuti mhinduro iyi yeColombia yekupa mukana uyu inoratidza kukurumidza kuri kuitika muColombia muhupfumi hwayo, hupfumi hwayo hwemagariro nekusimudzira nekuda kwemaonero matsva erunyararo.
Steinmetz: Iwe ungawedzera sei kukosha kwekushanya mukati meiyo UN system, kusanganisira matambudziko ebhajeti, mumiriri wehofisi, nezvimwe?
Cabal: Iko kushanya kwepasirese nhasi kuri kuwedzera asiwo kushandura kushanya. Shanduko dzinogona kuwanikwa mukati memhando nyowani dzekushanya, zvido zvitsva zvevashanyi uye matekinoroji matsva. Nyika idzi dzinonyanya kuziva nezve mugariro pamwe nehupfumi hwezvekushanya uye nekudaro zvakakosha kuti UNWTO ive sangano rinoshanduka uye rinoshanduka iro rinogara richizvigadziridza, iro rinodudzira zvinhu zvitsva zvepasirese nepasirese nenzvimbo. Uku kuziva, hongu, kunofanirwa kukura mukati mehurongwa hweUnited Nations uye kuwedzera kwebhajeti kwakakosha kuitira kuti ugone kugadzira zviitiko zvitsva nezvirongwa. Naizvozvo, ndakakurudzira kudzikiswa kwemari yemukati uye kuwedzerwa kwezvekudyara zviwanikwa zvezvirongwa uye zviitiko. Kusimbiswa kwebhajeti uku kunofanirwa kuwanikwa kuburikidza nekuwedzera kweMatunhu Nyika pamwe neZvibatanidzwa Nhengo uye nekutsvaga zviwanikwa padanho repasi rose izvo zvinogona kubatsira kumari dzakasiyana kudzidzisa kudyara muzvirongwa zvitsva.
Steinmetz: Ndeipi yako mhinduro pane yanhasi kuchengetedzeka kwepasirese matambudziko?
Cabal: Ugandanga uye kukura kwekusachengeteka zvinokanganisa nyika zhinji, matunhu, nemaguta. Izvi, hongu, zvinofanirwa kuve kunetseka kukuru kweUNWTO nehutungamiriri hwayo. Sezvatakataura, UNWTO inofanirwa kuve inodzidzisa uye chipangamazano kune iyo Nhengo Nyika dzichipindura zvavanoda nekukurumidza. Mumwe mubvunzo unofanirwa kupindurwa neUNWTO ndeye, semuenzaniso, nzira yekubatsira munguva dzenjodzi munzira isinganetsi uye yekukurumidza yekurwisa zvinokonzeresa zvehugandanga zvakatarisana nemamwe maguta nematunhu. Uye apa ndipo panoda nyika Sangano: kupa zvirongwa zvekusimudzira pamwe neruzivo nekutaurirana zvichipa mhinduro nekukurumidza kuzvinhu zvavanoda, kupa vashanyi ruzivo kwavanogona kuenda nezvimwe uye, seizvi, kurwisa zvakashata kana chifananidzo icho kurwiswa kwegandanga kunogona kuve nacho munyika kana guta. Iko kufungidzira kuri pachena hakuna shanduko nekukasira sezvinoita chokwadi, uye shanduko iyi yezvinhu inofanirwa kuperekedzwa neUNWTO kuburikidza nehukama hwayo neDare Nyika. Panofanirwa kuve nechikwata chinofanirwa kupa mhinduro nekukurumidza kunyika dzinoda rutsigiro urwu. Izvi zvinoreva kuti pakati pezvakakosha zveSangano panofanira kunge paine chirongwa chekutsigira nyika dzinotya kana kurwisa kwemagandanga
Steinmetz: Ndeipi kumira kwako pamiganhu yakavhurika kana yakavharwa, maviza, mavhiza emagetsi uye dzimwe nyika dzakakosha dzichichinjira kunharaunda yakavharwa.
Cabal: Sezvandambotaura mune mimwe mibvunzo yapfuura, UNWTO inofanirwa kuita semubatsiri uye chipangamazano uye mune ino mamiriro, inofanirwa kuyedza kubvisa zvipingamupinyi zviripo kuitira kuwedzera kuyerera kwevashanyi nekugadzira nzvimbo nyowani dzekushanya. Nguva zhinji, zvipingamupinyi izvi zviripo nekuda kwekudzora pamuganhu uye zvisungo zvevisa zvinokanganisa kuwedzera uku. Pano, iyo UNWTO inofanirwa kushanda semubatsiri uye rutsigiro kuitira kuti nyika dzizive nezve zvingaitika zvakanaka zvekusimudza zvinodikanwa zvevisa zvakatemerwa vashanyi munyika. Panguva imwecheteyo, inofanirwa kushanda seye chipangamazano kune vashanyi kuitira kuti vafambise kufamba uye vape ruzivo nezve zvipingamupinyi zvavanogona kusangana nazvo. Mune mamwe mazwi, UNWTO inofanirwa kutora chinzvimbo chakakosha mukuvandudzwa kutsva uku pamwe nekubatana kwenyika kuitira kuti vashanyi vafambe zviri nyore uye vabatsirwe nehunyanzvi hutsva kupinda mune imwe nyika, iyo yatovepo munhandare zhinji kuburikidza nemaviza emagetsi.
Steinmetz: Chii chaunomira pakubvuma kwemapoka mashoma, kusanganisira indasitiri yekufambisa yeLBBT?
Cabal: Ini ndinofunga kuti UNWTO inofanirwa kuve mufambisi uye chipangamazano kune nhengo dzayo dzeNyika zvine chekuita nemazano eruzhinji uye inofanirwa kutarisa mhando dzakasiyana dzekushanya, zvigadzirwa zvakasiyana zvekushanya kana shanduko dziri kuitika munyika dzakasiyana. Panyaya iyi, kushanya kweLBBT kwakawana kukosha kukuru nekutora chikamu kwakawanda kwezvigadzirwa zvinopihwa mune dzakasiyana nyika dzepasi rose. Ini ndinofunga kuti UNWTO inofanirwa kuve neinosanganisira nzira kune ino yekushanya maitiro, panguva imwe chete, ichinyatso kurwisa uye kurwisa idzo nzira dzekushanyirwa dzinotyora kodzero dzevanhu uye kuyedza kurwisa maitiro akanaka sezvazviri nyaya yekushungurudzwa pabonde, kutengeswa kwevanhu uye kushandiswa kwevana, pakati pevamwe.